Maung Maung with Prof. Chandra Muzaffar @ Judgement day of PPT | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
HomeMaung Maung with Prof. Chandra Muzaffar @ Judgement day of PPT
Maung Maung with Prof. Chandra Muzaffar @ Judgement day of PPT
September 22, 2017 drkokogyi
Maung Maung is feeling proud at Faculty of Law, University of Malaya.
With Prof Chandra Muzaffar
Look…Yesterday only, I was telling you about this Prof Chandra Muzaffar who I knew foralong time. When he was stopped from UM, I wrote an e-mail to him and he published in his blog. I had treated him personally @ UHKL when Prof. came in with back pain. I even knew that my mentor late UM VC Prof. Dr Syed Hussein Allatas (founder of Gerakan) given his name.
Prof Chandra Muzaffar @ Wikipedia
Prof Chandra Muzaffar @ Just World
Dr Chandra Muzaffar who is organising committee chairman for Tribunal on the Rohingyas says witnesses will be called to testify in court-like setting.
← The Permanent Peoples’ Tribunal on Myanmar to deliver judgement today
သတ္တိရှိရင် လွတ်လပ်တဲ့ ပြည်သူ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်တရပ်ဖွဲ့ပြီး၊ တနိုင်ငံလုံး ဖြစ်ခဲ့သမျှ ကျောက်နီမော် က စ၊ တောင်ကုတ် လူသတ်မှု၊ မိတ္ထီလာ လူသတ်မှု၊ တနိုင်ငံလုံး ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှ ဘာသာရေး လူမျိုးရေး အကြောင်းပြ အကြမ်းဖက်ဆူပူမှုတွေ ကို လွတ်လပ်စွာ ဖေါ်ထုတ်ခွင့်ပေးလေ →
One thought on “Maung Maung with Prof. Chandra Muzaffar @ Judgement day of PPT”
” ဘာကြောင့် သီတဂူ ကိုပါ ကိုးကွယ်ထိုက်သော သံဃာစာရင်း မသွင်း၊ တိုင်းပြည်ဖျက် လူယုတ်မာစာရင်း သွင်း ရသလဲ တဲ့ ”
သူဟောနေတဲ့ အမုန်းတရားတွေကြောင့် ခုလို သူ့ကို ရှေ့ဆုံးက ထားပြောရတာပါပဲ။
ဗုဒ္ဓသံဃာ ဆိုရင် ဗုဒ္ဓစကား ဗုဒ္ဓတရား ကလွဲလို့ တခြား ဘာမှ ပလီစိခြောက်ချက် ဟော စရာ၊ ပြောစရာ အကြောင်းမရှိ လို့ပဲ ကျနော် ခံယူပါတယ်။
သီတဂူ ရဲ့ ပရဟိတလှူတန်းမှုတွေကို တချို့က အကြောင်းပြုပြီး ကြည်ညိုဖွယ် သံဃာ လို့ မြင်ကြတယ်။ ကျနော်လက်မခံပါဘူး။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ သီတဂူထက်မက လှူနေတဲ့ ဘာသာခြားတွေ၊ အများကြီးပါ။ မာသာထရီဇာ ထက်ကော ဘယ်သူ ပရဟိတ လုပ်နိုင်မလဲ။
ပြောချင်တာ ပရဟိတသက်သက်၊ လှူရုံသက်သက်ဟာ ဗုဒ္ဓသံဃာဂုဏ် မဟုတ်ဘူး။
သီတဂူ ရဲ့ နေထိုင်မှု ဟာလဲ သံဃာ့ဂုဏ် မမြောက်ပါ။
သံဃာ ဆိုသည်မှာ သံသရာဝဋ်ဆင်းရဲကို မြင်သိ ကြောက်ရွံ့သော စိတ်နှလုံး နဲ့ အပ္ပမာဒေထ သမ္ပာဒေထ အစဉ်မပြတ်သော သတိဆင်ခြင်မှု သွင်းပြီး နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း ကျားကုပ်ကျားခဲ အားထုတ်နေသော သူသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခုခေတ် ထိုသို့ ရဟန်း သံဃာ စစ်စစ်မျိုးကို မဟာဗောဓိမြိုင် ဆရာတော်ကြီး တပါးသာ တွေ့ရတယ်။ တခြား ကျနော် မသိသော သံဃာတော်များလဲ ရှိနိုင်ပါတယ်။
တချို့ဆရာတော်ကြီးများကတော့ ပရိယတ္တိ ဗုဒ္ဓစာပေ ကို လေ့လာဆည်းပူး ပြန်လည်သင်ကြားပို့ချကာ ဝိနည်းမတိမ်းမယ်ိမ်းအောင် စောင့်ထိန်း ဆင်ခြင် နေထိုင်သီတင်းသုံးကြပါတယ်။
ထိုသံဃာများလည်း ကြည်ညို စရာပါပဲ။
တချိန်က အရှင်ဇနက္ကာဘိဝံသ၊ ညောင်လေးပင်ရွှေကျင်ဆရာတော် ဦးအရိယဝံသ တို့လို၊ ယနေ့ခေတ် ပါမောက္ခဆရာတော်လို သံဃာမျိုး ကို ပမာပြုပါရစေ။ နှုတ်ထွက်သမျှ ဗုဒ္ဓစကား ဗုဒ္ဓတရားမှတပါး မည်သည့် လုပ်ကြံ ပလီစိခြောက်ချက် စကားမှ မပြော မဟော လူတို့ကို လမ်းမှားသို့ မပို့သော သံဃာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလောက်ဆို ဘာကြောင့် သီတဂူ ကို သံဃာ မမည်သော တိုင်းပြည်ဖျက် ပုဂ္ဂိုလ်စာရင်းသွင်း ရတယ် ဆိုတာ ထပ်ရှင်းစရာ မလိုတော့ဘူး ထင်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓစကား၊ ဗုဒ္ဓ တရား မဟုတ်သော အမေစုထောက်ခံတရားဟောနေလဲ သံဃာ ဟု မမြင်၊ မကိုးကွယ်၊ မကန်တော့လို။
သင်္ကန်းပတ်၊ ဂတုံးတုံးပြီး လူတွင်ကျယ်၊ လူညွန့်ခူးစား၊ လူဝါးဝ နေကြသော သာသနာအရိပ်ခို အချောင်သမားများ ဟုသာ အထင်သေး၊ စက်ဆုပ်၊ ရွံရှာ လှတယ်။